Umhlahlandlela wokuphepha wemithi yasekhaya – ungazigcina kanjani izingane nezilwane ezifuywayo ziphephile - Imfundo Yezempilo | Septhemba 2021
Ezemidlalo Ezisindayo Ezempilo Izindaba, Wellness Ukuphila Kahle Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Imidlalo Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Izindaba Inkampani Ukuphuma Umphakathi, Ukuphila Kahle Izilwane Ezifuywayo Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Inkampani, The Checkout
Main >> Imfundo Yezempilo >> Umhlahlandlela wokuphepha wemithi yasekhaya – ungazigcina kanjani izingane nezilwane ezifuywayo ziphephile
Umhlahlandlela wokuphepha wemithi yasekhaya – ungazigcina kanjani izingane nezilwane ezifuywayo ziphephile
Imithi yizinto ezinamandla ezingayithuthukisa kakhulu impilo yethu. Futhi banamandla okulimaza uma besetshenziswe ngokungafanele noma ezandleni ezingafanele.
Njengomzali, kufanele uhlale ukhumbula ukuthi izingane zifuna ukwazi futhi zingabahloli bemvelo, kusho uMary Sweeney, RN, umeluleki wezokwelapha wewebhusayithi yokuba ngumzali Umama Uthanda Okuhamba Phambili . Bazobheka kunoma yiliphi idrowa noma ikhabethe abakwaziyo. Kunjalo nangezilwane ezifuywayo. Bangaba nelukuluku futhi futhi bahlakaniphe ngokumangazayo ngokungena ezindaweni ocabanga ukuthi abazi noma abangakwazi ukufinyelela kuzo.
Izingane nezilwane ezifuywayo aziqondi ukuthi yini efanele ukudliwa nokuthi yini engafanele. Bayakubona udla amaphilisi uwagwinye, pho kungani kungafanele?
Futhi uma izingane zakho noma izilwane ezifuywayo empeleni yenza Udinga imithi, kufanele uthathe indima yokuba ngumhlengikazi futhi ubanikeze yona. Imithi ehlukene idinga imithamo ehlukene, futhi idinga ukuphathwa ngezikhathi ezingafani. Ngisho nasezibhedlela, amaphutha ayenzeka.
Noma ngabe kusuka kwilukuluku labo noma iphutha elenziwa umuntu omdala empilweni yabo, cishe izingane ezingama-60,000, nezilwane ezifuywayo ezingenakubalwa, zifika emakamelweni okuphuthumayo minyaka yonke ngoba zingenise umuthi ngengozi.
Ukuprakthiza ukuphepha kwemithi yasekhaya enhle kungaqinisekisa ukuthi akudingeki uhlangabezane nohambo olwesabekayo, futhi olungashintsha impilo, lokuya esibhedlela.
Kuyini ukuphepha kwemithi yasekhaya?
Ukuphepha kwemithi yasekhaya kuwumkhuba wokuqinisekisa ukuthi:
Umuntu / isilwane esinikezwe umuthi nguyena kuphela osiphuzayo.
Umuntu / isilwane sithatha umuthi ngendlela ohlose ngayo udokotela wabo.
Ukuphepha kwemithi yasekhaya kukuvikela wena, izingane zakho nezilwane ezifuywayo engozini.
Kungani ukuphepha kwemithi kubalulekile?
Ngokuvumelana ne Izikhungo Zokulawulwa Nokuvikelwa Kwezifo , imicimbi emibi yezidakamizwa (ADEs) idala ukuvakashelwa kwamagumbi okuphuthumayo angaphezu kwezigidi eziyi-1.3 ngonyaka. Kulabo, abantu abangu-350,000 ngonyaka balaliswa esibhedlela. Ama-ADE alinganiselwa ukuthi abiza uhlelo lwethu lokunakekelwa kwezempilo imali engaphezulu kwe- $ 3.5 billion ngonyaka.
Kungani le micimbi ivame ukwenzeka? Kalula nje, ukwethulwa kwemithi emisha, ewusizo kusho ukuthi sithatha amaphilisi amaningi. Lapho sinemithi eminingi okufanele siyiphuze (noma siyinike ingane noma isilwane), kunethuba eliphakeme lokuthi sizosebenzisa umuthi ongafanele noma isilinganiso esingalungile ngephutha.
i-otc engcono kakhulu yokucinana kwesifuba nokukhwehlela
Yini ama-5 R okuphepha kwemithi?
Ukulandela ama-5 R okuphepha kwemithi kuyindlela engcono yokuqinisekisa ukuthi awulimazi ingane yakho noma isilwane sakho ngengozi lapho usinikeza imithi.
Izibhedlela zilandela lezi zinyathelo ngqo lapho zinikeza iziguli imithi.
Noma ngabe unesiqiniseko sokuthi ubamba ibhodlela lephilisi elikhona lapho ulishiye khona, omunye umuntu endlini kungenzeka ukuthi unyakazise amabhodlela. Yenza iphuzu ukuze ubheke ibhodlela lephilisi, bese ufunda igama lomuthi ngokuzwakalayo.
Enye yezimbangela ezivame kakhulu zemicimbi emibi yezidakamizwa ivela ekunikezeni imithamo engafanele — imvamisa lapho abantu bengayifundi kahle noma bengayilinganiseli kahle inani lemithi.
Amaphilisi okulinganisa kufanele abe lula ngokwanele: Vele uhlole kabili inani. Kwesinye isikhathi kunikezwa uhhafu wamaphilisi ikakhulukazi lapho unikezwa izingane noma izilwane ezifuywayo. Lokhu kufanele kumakwe ngokucacile ebhodleleni.
Imithi ewuketshezi ingaba yinselelo enkulu ngoba kufanele uzilinganisele inani lakho. Le mibhalo kwesinye isikhathi iza nezilinganiso zemetrikhi ezingajwayelekile (njengamamililitha).
Qiniseka ukuthi usebenzisa idivaysi yokulinganisa eza nomuthi, kusho uTori Hamilton, RN, umsunguli wesiza solwazi lobuzali Umama.com . Uma umuthi ungezi nedivayisi yokulinganisa, isirinji noma inkomishi enelebula kufanele isetshenziselwe ukuqinisekisa ukunemba, usho kanjalo. Abazali kufanele bakugweme ukusebenzisa izinkezo ukukala ngoba azithembekile.
Ngoba kusetshenziswa imishanguzo ehlukile yokwelapha izinto ezahlukahlukene, kunengqondo ukuthi izosebenza kahle kakhulu kumaza ahlukene. Kepha lokhu kungenza ukudideka kwemithi kudide.
Eminye imishanguzo ithathwa kanye ngosuku, eminye ekuseni kakhulu nasebusuku, kanti eminye ithathwa ngokungaguquguquki usuku lonke. Ukulandela le miyalo kuzosiza ingane yakho noma isilwane sakho siphile ngokushesha. Ukuphazamisa isikhathi ngephutha kungabenza babe babi kakhulu.
Isixazululo esihle kunazo zonke uhlelo lwemithi olubhaliwe. Ukubhala konke ngokulandelana kwesikhathi kuzokusiza ugweme amaphutha. Uma kunabantu abaningi abahlinzeka ngemithi, uhlelo oluphrintiwe luzoqinisekisa ukuthi wonke umuntu usebenza ngolwazi olufanayo.
Uma udinga usizo lokukhumbula ukuthi uzoyisebenzisa nini imishanguzo, setha ama-alamu kumakhalekhukhwini wakho ahambisana nezikhathi ezibhalwe ohlwini. Imizuzu embalwa yokusetha ingakusindisa ekulahlekelweni umthamo wemithi ingane yakho noma isilwane esiyidingayo.
Hlola kabili bese usho ngokuzwakalayo ukuthi umuthi kufanele uye kuphi, ikakhulukazi amaconsi wamehlo noma amaconsi endlebe.
Amaphilisi amaningi anikezwa ngomlomo — okungaba yinkinga ezinganeni ezixakekile. Ukulungiswa okulula kokuxuba umuthi nokudla kungumbono omubi. Ngokuvamile kungcono ukungayihlanganisi imishanguzo nokudla noma isiphuzo ngoba kungaphazamisa ukusebenza komuthi noma kungcolise umthamo, ngokwe-American Academy of Pediatrics . Buza udokotela noma usokhemisi wengane yakho ngaphambi kokuxuba imithi nokudla noma uketshezi.
Ukuqinisekisa ukuthi ulandela umzila ofanele, qina. Baqondise ukugwinya lonke iphilisi njengoba kuhlosiwe, bese ulinda baze bakwenze. Uma beqhubeka benqaba, shayela udokotela wakho noma usokhemisi ukuthola izeluleko ezifanele umuthi othize ozama ukuwunika.
Ngezilwane ezifuywayo, ukubhangqa imithi nokudla kungaba ukuphela kwendlela yokuthola ukuthi bakuthathe. Lapho udokotela wezilwane ekunika amaphilisi noma umuthi owuketshezi, cela izeluleko mayelana nendlela engcono yokuqinisekisa ukuthi isilwane sakho sithola isilinganiso esifanele.
Uma unabantu abaningi noma izilwane ezifuywayo ezithatha imithi, kulula kunokuba ungacabanga ukunikeza umuthi kumuntu ongafanele. Njengesinyathelo sokugcina ngaphambi kokufaka umuthi, bheka futhi umuthi owuphethe ukuqinisekisa ukuthi uwunikeza isiguli esifanele.
Uyigcina kanjani imithi iphephile?
Kunezindlela ezimbalwa zokugcina imishanguzo ngokuphepha:
Gcina imithi ebhokisini elikhiyiwe.
Gcina ibhokisi elikhiyiwe eshalofini eliphakeme kakhulu ongakwazi ngalo.
Qiniseka ukuthi ishalofu lisekamelweni elijwayelekile njengekhishi, hhayi elakhiwayo njengendlu yangasese.
Ingabe udinga ibhokisi lokukhiya imithi?
Udinga ibhokisi lokhiye lwemithi uma unezingane noma izilwane ezifuywayo ekhaya lakho, futhi awunayo enye indlela yokukhiya imithi. Uma ikhaya lakho linekhabethe elikhiywayo elingenakufinyeleleka ezinganeni zakho, lokho kuzosebenza futhi.
Kukhona okuhlukile, kuphawula uSweeney. Uma udinga ukufinyelela kaningi noma okulula emithini yakho, njenge-EpiPen yezifo ezisongela impilo, kungahle kungaphephile ukuthi imishanguzo yakho ikhiywe futhi ikhiye, usho kanjalo. Uma kunjalo, beka imithi phezulu ngangokunokwenzeka.
USweeney uphawula nokuthi amakhabethe emithi ezindlini zokugezela awekho phezulu kakhulu, futhi izingane zingafinyelela kuzo kalula esihlalweni noma ngenhla kwekhawunta. Izingane nazo zingazivalela endlini yokugezela, ukuze ungaboni ukuthi zenzani. Cabanga ukubeka umuthi eshalofini eliphakeme kakhulu onalo ekamelweni lakho lokulala noma ekhabethe lasekhishini esikhundleni salokho, usho kanjalo.
Ingabe kulungile ukugcina umuthi efrijini?
Gcina kuphela imishanguzo kadokotela efrijini uma ikhemisi ikutusa. Uma unezingane, thenga ibhokisi lokukhiya ikakhulukazi le mithi, bese uligcina efrijini. Izindleko ezengeziwe kufanelekile ukugwema ingozi yokweqisa ngokweqile yizingane ezifuna ukudla.
Ungalitholaphi ikhabethe lezemithi elingavikeleki enganeni?
IKhabethe lezemithi elingavikeleki ezinganeni yilona eliza nokukhiya nokhiye. Cela eyodwa esitolo sendawo esithuthukisa ikhaya.
Amalokhi angavikela izingane atholakalayo kumakhabethe emithi awanele ukuvikela ezingozini zokweqisa izidakamizwa ngengozi. Njengoba izingane zakho zikhula, zizofunda ukuvula lezi zingidi.
Njengoba kushiwo ngenhla, ungathenga futhi ibhokisi lokukhiya lemithi ukugcina imishanguzo ngokuphepha.
Yini esingayenza ukwenza ikhaya liphephe ezinganeni maqondana nemithi?
Kunezinto ezimbili ezibalulekile ongazenza ukugcina ikhaya lakho iphephile ezinganeni uma kukhulunywa ngemithi :
Qiniseka ukuthi izingane zakho azikwazi ukufika kunoma yimiphi imithi-kufaka phakathi amavithamini namafutha.
Khuluma ngemithi nezingane zakho — ngendlela efanele.
Gcina yonke imithi iphephile. Uma ungenalo ibhokisi lokukhiya, lithenge — futhi okwamanje, gcina imithi eshalofini eliphakeme kakhulu ekhaya lakho. Futhi, cela usokhemisi wakho ukuthi akunikeze amakepisi amelana nezingane. Ungathola futhi izivalo ezenzelwe ukukhiya amaphilisi, kepha kufanele ukhiphe amaphilisi ebhodleleni lawo langempela elinemininingwane kadokotela kuwo. Lokhu kungaholela ekudidekeni lapho ufaka amaphilisi, ngakho-ke ukugcina amabhodlela okuqala ephephile kuyindlela engcono kakhulu.
Uma ugcina umuthi esikhwameni sakho, kufanele ubeke isikhwama sakho semali eshalofini eliphezulu lapho ungasiphethe, kusho uSweeney. Uma ingane yakho ithanda ukuqalaza esikhwameni sakho, udinga ukuyifundisa ukuthi isikhwama sakho semali siyimpahla yakho yangasese futhi akufanele babheke lapho.
Khumbula: Ukuthi ibhodlela, isitsha, noma ikesi lithengiswa ngaphezu kwekhawunda akusho ukuthi akulona ingozi. Vikela izingane zakho kwilukuluku lazo ngokugcina lezi zinto zingangeni kuzo ngaso sonke isikhathi.
Futhi, lahla imithi eyengeziwe noma engasetshenziswanga ngokuphepha . Ithuba lokuthi bazofika ngelinye ilanga alifanele ingozi yengane noma isilwane esizifakile ngengozi.
Futhi, noma ngabe uthatha ziphi izinyathelo zokuphepha eziningi, gcina i- Ukulawulwa Kobuthi inombolo ye-hotline ekhonjiswe ngokugqamile ekhaya lakho. Inombolo ingu-800-222-1222, futhi ikuxhumanisa nendawo yokulawula ubuthi uma kwenzeka ukweqisa ngokweqile ngephutha. Bazokusiza unqume ukuthi uzokwenzenjani ngokulandelayo.
Ukukhuluma nezingane ngemithi
Ake siqale ngalokho hhayi ukutshela izingane zakho ngemithi. Ungalokothi utshele ingane ukuthi umuthi uswidi noma ukuthi uzoyithanda ngomzamo wokuyenza iphuze.
Uma becabanga ukuthi umuthi uswidi (noma uma bedla izidakamizwa ezibukeka njengoswidi), bazofuna okungaphezulu, futhi bangagcina bethathe okuthile okubenza bagule.
Tshela izingane iqiniso ngemithi. Chaza ukuthi imithi yinto enhle uma iphuzwe kahle, kusho uSweeney. Kepha uma kuthathwe okuningi kakhulu noma kuthathwa lapho kungadingeki, kungaba nemiphumela emibi. Lokhu incwadi yokuphepha yemithi yokuphepha ingakusiza uqalise ingxoxo.
Izingane ziyathanda ukulingisa abazali bazo, ngakho-ke uma zikubona uthatha umuthi, zingafuna ukukuzama. Kwesinye isikhathi, izingane zizothi zinekhanda elibuhlungu noma isisu ukuze zithole ukunambitheka kwamaphilisi asetshenziswa abazali bazo. Qiniseka ukuthi ubona izimpawu zangempela zokugula ngaphambi kokunikeza izingane zakho imithi yokwelapha. Futhi, thintana nodokotela noma usokhemisi ukuze uqiniseke ukuthi umuthi ufanele iminyaka yabo.
Yini esingayenza ukwenza ikhaya liphephe ezilwaneni ezifuywayo maqondana nemithi?
Into ebaluleke kakhulu ongayenza ukugcina ikhaya lakho liphephile ezifuyweni uma kuziwa emithini? Ungabaniki yona ngaphandle kokuthi kuqondiswe udokotela wezilwane.
Izilwane ezifuywayo akuzona izingane ezincane, kusho uSara Ochoa, i-DVM, isilwane esincane kanye nodokotela wezilwane ongaphandle eTexas kanye nomeluleki wezilwane oklwab.com . Ungabaniki imithi yabantu ngaphandle kokukhuluma nodokotela wezilwane. Lokhu kungaba yingozi futhi kubulale nokufa.
lusho ukuthini uhlobo lwegazi lwe-rhesus negative
Yebo, eminye imishanguzo kadokotela neyezithenjini iphephile ezilwaneni. Ezinye izinja zinqunyelwe iProzac , ngokwesibonelo, kanye nemithi yokukhathazeka yesikhashana ingaba isisombululo esihle sokwesaba isilwane sakho ngeziqhumane . Kodwa ungenzi le kholi uwedwa. Alikho inani locwaningo oluku-inthanethi olungena esikhundleni seminyaka yokuqeqeshwa kukadokotela wezilwane. Shayela ubabuze ngaphambi kokwenza okuthile okwenza inkinga yesilwane sakho ibe yimbi kakhulu.
Gcina izilwane ezifuywayo zikude nakho konke abangase bakudle
Enye into ebaluleke kakhulu? Gcina imishanguzo nemishini yezokwelapha iphephile ekudleni okungakhethi okwenziwa izilwane ezifuywayo. Ngezilwane ezifuywayo, noma yini ingenzeka, futhi kwenzeka kaningi.
UKassandra Nielsen, iDVM, udokotela wezilwane e-October Road Veterinary Services eWoodstock, eConnecticut, ususe uLegos, baby pacifiers, imicibisholo yeNerf, kanye nengane enguJesu esiswini sezilwane ezifuywayo. Enye indaba esabekayo asanda kuyifunda ichaza umnikazi wesilwane ezwa i-pop enkulu nomsindo ohayizayo, futhi ebheka phezulu ukuze abone inja yakhe yezinkomo yase-Australia ishaya i-albuterol inhaler yendodana yakhe.
Ngisho nenani elincane le-albuterol lingadala imiphumela emibi esongela impilo, kusho uDkt Nielsen. Kusuka kwabamnene njengokuyaluza nokuthuthumela, kuye kokubi kakhulu njengokushaya kwenhliziyo okuyingozi, umfutho wegazi ophakeme nokuquleka. Inja ichithe amahora angama-24 esibhedlela yaze yathola ukushaya kwenhliziyo nomfutho wegazi.
Qiniseka ukuthi yonke imishanguzo yakho itholakala eshalofini eliphakeme kakhulu onalo, futhi alikwazi ukufinyelelwa izilwane zakho ezifuna ukwazi. Futhi, ibhokisi lokukhiya liyindlela yokuqapha enhle kakhulu okusho ukuthi awusoze wakhathazeka ngokweqisa ngokweqile isilwane sakho.
Izinyathelo ezilula zokuzivikela zikunikeza ukuvikeleka okuvelele emicimbini emibi yezidakamizwa
Ukuvikela izingane zakho nezilwane ezifuywayo ekudleni ngokweqile kubalulekile futhi kulula. Landela ama-5 R uma ufaka umuthi, futhi uma usuqedile, khiya lowo muthi. Ukutshalwa kwemali okuncane kwesikhathi, ukunakwa, nemali okuzokunika ukuthula kwengqondo okwanele.
I-Tramadol vs. Hydrocodone: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
ICodeine vs Hydrocodone: Umehluko Omkhulu nokufana
onjani umuthi wezinhlungu ongathathwa ngumuntu okhulelwe
indlela yokwelapha amakhambi asekhaya e-erectile ukungasebenzi
Ngabe uhlelo b luzosebenza ngemuva kwesonto
okubanjwayo futhi okuphezulu ephaketheni kuyefana
ingabe kulungile ukuthatha i-20mg ye-melatonin